MOD ka MOV - Olee otú iji tọghata MOD ka QuickTime MOV on Mac / Windows
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata MOD ka QuickTime MOV na Mac OS X odum / Windows
Dị ka anyị maara, MOV bụ a na-ewu ewu video format iji a proprietary mkpakọ algọridim na dakọtara na ma Macintosh na Windows nyiwe, karịsịa playable on iPhone, iPad na iPod maka ntụrụndụ na-akwagharị. Mgbe MOD bụ a format n'ọtụtụ ebe na ịzọpụta media data on camcorders na ese foto na ọ bụghị otú ewu ewu na mobile ngwaọrụ dị ka iOS ngwaọrụ na ọbụna nwere ike ghara ghọtara site ụfọdụ Mac ngwa ọdịnala dị ka QuickTime. Ya mere ọ bụrụ na i nwere nsogbu na nke a, ị nwere ike tọghata MOD ka QuickTime MOV maka mgbanwe.
Isiokwu a na-elekwasị anya MOD ka QuickTime MOV Mac ​​akakabarede nakwa dị ka MOD ka QuickTime MOV Windows akakabarede maka enyere gị aka playback gị cam obere vidiyo na ngwaọrụ gị ma ọ na-eji ha Mac software were were. Iji mee otú ahụ, a ọkachamara video Ntụgharị ga-enyere. Ebe a Video Ntụgharị maka Windows na Video Ntụgharị maka Mac (Mountain Odum, odum akwado) na-ejikwara na MOD ka MOV conversions. Ebe a zuru ezu na-egosi gị otú ị tọghata MOD ka QuickTime MOV na Mac na ọ bụrụ na ị wanna ime ọrụ na Windows, ị nwere ike ịga na User Guide nke Video Ntụgharị N'ihi na ihe Ama.
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu MOD faịlụ ka MOD ka MOV (QuickTime) Mac Ntụgharị
Kpọmkwem ịdọrọ & dobe gị MOD cam faịlụ ka Mac ngwa, ma ọ bụ isi "File" mgbe ahụ họrọ "Ibu Ibu Media Files" na-agagharị na kọmputa gị na-ahọrọ MOD faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Ị nwere ike Ibu Ibu ọtụtụ MOD faịlụ otu mgbe na ọrụ nke ogbe akakabarede.
Nzọụkwụ 2: Mee mmepụta format dị ka MOV (QuickTime)
Mgbe agbakwunye MOD faịlụ, ị nwere ike ịtọ gị mmepụta format dị ka "MOV" site na ịpị format na akara ngosi na interface. Ebe ị nwekwara ike ịtọ gị video encoder, mkpebi, etiti ọnụego, nakwa dị ka gị audio ọwa. Ọ bụrụ na ị wanna-egwu faịlụ na iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, ị nwere ike ịhọrọ presets maka ha ozugbo.
Nzọụkwụ 3: Malite iji tọghata MOD ka MOV (QuickTime) na Mac OS
Pịa "tọghata" button na-amalite converting MOD ka MOV (QuickTime) na Mac-agba ọsọ Mac OS X Snow agụ owuru, odum, Mountain ọdụm, wdg Mgbe na ị nwere ike pịa "Open nchekwa" ịchọta gị converted faịlụ. Ma ọ bụ i nwere ike pịa mmepụta ndọpụta ndepụta ka ebe ị chọrọ ịzọpụta gị mmepụta faịlụ n'ihu akakabarede.
Atụmatụ: MOD ka MOV Mac ​​Video Ntụgharị (Mountain odum gụnyere) na-enyekwa video edezi ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị video ọzọ ahaziri, pịa "Dezie" button. Ị nwere ike tinye watermark ma ọ bụ a sobtaitel, na ịtọ video ìhè, iche, wdg
Olee otú Chọta Best iTunes Movie amụọ na Rentals
Olee otú iji tọghata M4V ka mpg
Ịghọta AVCHD faịlụ Ọdịdị
Top 3 AVCHD converters maka Windows na Mac
Idozi Ndakọrịta Nsogbu maka iPad
Idozi Ndakọrịta Nsogbu maka FLV